mairie-antananarivo – Tafa tamin’ny mpanao gazety nataon’i DUD- CUA momba ny trano eo Ambohijatovo sy ny tany eny Andohatapenaka
auteur 16 martsa 2017 Commentaires fermés
Androany 16 martsa 2017 dia nisy ny fihaonana tamin’ny mpanao gazety izay notontosaina tato amin’ny Lapan’ny Tanàna Analakely, izay notarihan’ny talen’ny « Urbanisme et Développement » Razafintsihoarana Edison ; ka voaresaka tamin’izany ny mikasika ny anton’ny fandravana ny trano tetsy Ambohijatovo ambonin’ny tunnel Ambanidia sy ny tsy fanarahan-dalàna etsy amin’ny tany Andohatapenaka.
Voalazan’ ny tompon’andraikitry ny kaominina Antananarivo Renivohitra fa mijery mandrakariva ny tombontsoan’ny olona maro sy ny fananany hatrany ny Ben’ny Tanànan’Antananarivo Renivohitra, Lalao Ravalomanana, ary izany dia ao anatin’ny fampanarahana ny lalàna.
Araka izany indrindra dia nanazava ny antony nandravana ilay trano tetsy Ambohijatovo ambonin’ny tunnel Ambanidia izy, noho ny vaovao tsy marina miely tamin’ny haino aman-jery sasany.
Tsy maintsy narodana ny trano tetsy ambonin’ny tunnel satria tafiditra ao amin’ny “zone sensible” izany hoe tsy azo anorenana io toerana io satria mbola mila fanamboarana ny tunnel. Eo koa ny fahazoan’ny Kaominina rariny tamin’ny fitsarana amin’ny tsy maha ara- dalàna ny fanorenana ilay trano eo Ambohijatovo ambony io, ary ny kaominina Antananarivo dia efa nampilaza izany tsy fahazoana manorina izany araka ny lalàna misy. Ankoatra izany, ny Ministera koa dia efa nanome naoty amin’izay tsy fahazoana manorina izay eo amin’io faritra ambonin’ny tonelina tsy azo anorenana io.
Marihana fa ny volana jona 2016 ny tompontrano dia naka « huissier » nanao constatation, voalazan’ny huissier sy ny sefo-fokontany tamin’izany ilay trano kely tsy misy rihina teo fa tsy azo ipetrahana io trano io satria misy tritra ny zoron-drindrina, efa miseho koa ny vy ka atahorana ho tapaka. Taorian’izay indray dia io tompontrano io ihany, tonga nanao « régularisation » ny trano tsy ara-dalàna tamin’ny fiantsoan’ny kaominina Antananarivo renivohitra momba ny « opération permis » ny taona lasa teo.
Nisy ihany koa ny taratasy avy amin’ny « service Régional de l’Aménagement de Territoire » nahitana fa zone sensible io toerana io. Araka izany dia tsy afaka manome « autorisation » azy mihitsy ny kaominina na oviana na oviana. Nefa ny tompon-trano mbola nihazakazaka nanao amboletra ny fanorenana ka mody nosaronana « pillié » ilay rindrina ; ny raharaha anefa mbola teny amin’ny fitsarana.
Teboka faharoa tamin’izao tafa tamin’ny mpanao gazety izao dia manantitrantitra ny tokony hanajana lalàna hatrany ny Kaominina Antananarivo Renivohitra mba tsy hisian’ny fihoaram-pefy momba ny tany eny Andohatapenaka.
Araka izany dia miantso ny « projet présidentiel » sy ny orinasa mikasa hanorina eo dia ny orinasa TOTAL ny kaominina, mba hijery sy hanaja ny lalàna velona, satria ifandimbiasana ny fahefana misy eto, ka ny fitondrana amin’ny manaraka mety tsy maintsy hampanaja izay lalàna misy izay.
Nanambara ary ny solontenan’ny kaominina fa tsy maintsy hiditra amin’ny fandravana ny tompon’andraikitra ho an’izay mbola mikiry biby tsy manara- dalàna, ny kaominina anefa na izany aza dia tsy tia ady fa mila olona manaraka ny lalàna velona.